Wiil Dhalinyaro ahaa oo lagu dilay Muqdisho & faah faahin kasoo baxeysa - Awdinle Online
Rag la sheegay inay Burcad ahaayeen ayaa xalay xaafada Nasteexo oo ka tirsan degmada wadajir ee gobolkan Banaadir waxaa ay ku dileen Wiil dhalinyaro ahaa, iyaga oo Goobta ka baxsaday.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay ku warameen in wiilka dhalinyrada aha aoo lagu Magacaabi jiray Cabdi Ganeey ay kooxda Burcadda ah ka dhacayeen mobile uu watay, hayeeshee muran kooban oo dhex-maray, kadib ay dhowr xabadood ku dhufteen halkaasina uu ku geeriyooday.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa gaaray halka uu falka ka dhacay, iyaga oo sameeyay howlgallo ay ku badi goobayeen Burcadii falkaasi ka dambeeysay wallow aysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan.
Degmooyin ka tirsan Gobolkan Banaadir ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa kusoo batay Burcadda xilliyada habeenkii dadka dhaca u geysanaya, waxaana jirtay kuwo qaarkood ay laamaha Amniga Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen.
Mas’uuliyiinta Mamulada degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa dhowr jeer waxaa ay sheegeen inay gacan bir ah ku qaban doonaan kooxaha Burcadda ah, waxaana dhowr jeer degmada dharkeenleey uu dagal ku dhex-maray Ciidamada Dowladda & Kooxaha Burcadda ah.
Previous articleDowladda Jabuuti oo bilaawday dejinta xiisada Soomaaliya & Kenya
Next articleQaar kamid ah Midowga Musharixiinta oo ku wajahan Magaalada Garoowe